playlist on Spotify iyo iyaga abaabulo la this
Way fududahay in la abuuro playlist ku Spotify iyo Them Abaabulaan la Tixraaca Tani
Spotify leedahay in ka badan 30 milyan oo heeso iyo waa mid ka mid ah adeegyada ugu weyn digital / online music heli karo maanta. Iyadoo heeso aad u badan oo la heli karo in ay buugga, waxa uu noqonayaa mid aad u fudud, waayo, mid si loo abuuro playlists in ay katimid wada saaray. Tani waxay dhacdaa in badan oo ka mid ah dadka isticmaala Spotify, si aad keligaa ma tihid. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad wax ogtihiin oo ku saabsan sifooyinka waxtar leh dhowr Spotify, waa inaad awooddaa in ilaa nadiif ah iyo habayn aad playlists Spotify in hab in aad ka heli karto heesaha oo si sax ah sida aad u baahan tahay. Aan u gudubnee, kuwaas oo mid mid.
Qaybta 1. Sida loo abuuro playlists Spotify
Qaybta 2.How in uu abaabulo ka playlists Spotify
Share playlists Spotify iyo download music free la TunesGo
Qaybta 1aad - Sida loo abuuro playlists Spotify
Samaynta, Iyo La magacaabo fayl Spotify
Waxaa jira laba siyaabood oo abuuraya folder Spotify ah, waxaad sidoo kale u tagi kartaa File> New playlist Folder iyo aad u hesho gal playlist cusub sare ee qaybta 'playlist' ama aad si fudud u xaq u riixi kartaa meel kasta oo qaybta 'playlist' ka dibna menu ka xulan New Folder si aad u hesho folder cusub meel. Si magaca, guji magaca folder ee hadda laba jeer oo overwrite wax aad rabto.
Samaynta, Iyo La magacaabo playlists Spotify
Si loo abuuro iyo magacaabo playlist cusub, waxaad sidoo kale riixi kartaa fursad u '+ New playlist' ka hoos category Qashin ama waxaad tagi kartaa File> New playlist. Iyo, isbedelka magaca playlist ah, guji ku yaal mar / ay doorasho ka dibna riix waxaa mar kale dhawr ilbiriqsi oo kale, taas oo hadda kuu ogolaaneysaa in aad overwrite magaca hadda jira iyo in wax laga beddelo.
Qaybta 2aad - Sida loo abaabulo ka playlists Spotify
Dib isugu habee fayl, playlists iyo raad / songs
Hadda, iyadoo Spotify, aadan helin fursad u ah rearranging ka fayl, playlists ama heeso si toos ah ayaa kala ah ama wax kale. Wax kasta oo uu leeyahay in la sameeyo gacanta marka ay timaado u gudbi doonaan waxyaabaha aad qabto in aad xisaabta. Mid ka mid ah wax wanaagsan, in kastoo waa mid aad u fudud in la isticmaalo qaababka Jiid jeedi in ka dhigaya nolosha fudud. Sidaas, haddii aad rabto in aad habayso fayl, playlists ama tacks, si fudud u jiidi oo hoos u iyaga si aad doorashada.
Saar kuwan raadkaygay nuqul ka playlist ah
<P> Nasiib darro, Spotify aanu kuu soo sheegi ma in si kasta haddii track nuqul waxaa lagu daray aad by u kasayn. Tani waa Downer weyn ee fikraddii. Sidaas oo ay tahayna, taas micnaheedu ma ahan in aadan heli karin nuqul ka baxsan raad aad playlist. Iyadoo Spotify, habka ugu fiican ee jaridda dhirta ka soo gabayadii nuqul waa in ay marka hore kala soocaa playlist iyadoo la isticmaalayo mid ka mid ah madax khaanadda (artist, track ama waqti) ka dibna raadi kuwa la mid ah oo ay tirtirto kuwa aad ka heli.
Add a song in playlist ah
Mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee Spotify waa muujinta Radio kuu ogolaanaya in aad si ogaan music cusub. Iyo, waxa ugu weyn waa in aan kaliya kuu ogolaanayaa inaad si ay u dhagaystaan ​​heeso cusub, laakiin sidoo kale iyagoo aad ku dartid aad playlist ee aad rabto in aad. Haddii aad jeclaan hees on Radio in aad dhagaysanayso, si fudud guji magaceeda si aad ah la qaado si shaashadda gol album oo hadda uun jiidi oo hoos u heesta loo doortay in ay aad playlist in aad ku darto. Waxaad sidoo kale u samayn karaa iyadoo gabayadii in aad hore u dhegaystay ee la soo dhaafay, oo ag maraya in ay fursad u 'Play safka' ka dhinaca bidix ee shaashadda ka dibna gujinaya ikhtiyaarka 'History'.
Kabsadaan ka tirtiray playlist Spotify
Islamarkaana la tirtiro playlist ah in aadan rabin in? Ha welwelin, sida ay tahay mid aad u fudud si aad u hesho dib. Si fudud u gasho in aad xisaabta ku Spotify.com dooro Account ikhtiyaarka. Hadda, dusheeda, waxaad arki doontaa liiska fursado la mid ah ugu danbeysay ay ka 'Ladnaansho playlist'. Haddii aad doorato Doorashadan, waa in aad la arki karin oo dhan playlists tirtiray ee la soo dhaafay iyo ikhtiyaarka 'Soo Celinta "mid kasta oo ka mid ah haddii aad rabto in aad noqon. Isla marka aad 'Soo Celinta "mid kasta oo iyaga ka mid ah, in si deg deg ah playlist soo laabto doonaa xisaabtaada.
Guraan playlists iyo fayl
Qoondayntani ee playlists iyo fayl ku Spotify ku xiran tahay oo aad u badan oo ku saabsan qofka shakhsiga ah. Waxaan aragnay in dadka isticmaala Spotify playlists iyo fayl ka duwan abaabulo, oo ku salaysan sida iyo waxa / Markay maqlan waxaa si. Waxaa la socday Waxaan inay taxaan qaar ka mid ah hababka caadiga ah in badan oo ka mid ah dadka isticmaala qaatay; si xor ah si ay u isticmaalaan ama isku daraan oo u dhigma sida aad dareensan tahay.
1. guraan oo ay ku sifayn - Abuuridda playlists oo fayl la isticmaalayo kala soocidda ee ku sifayn, waa mid ka mid caadi ah. Waxad abuuri kartaa fayl la sumadaha - hip hop, Qadiimiga ah, Pop Rock, Indie, Blues iyo dhowr kale sida sida. Markaas Waxaad ku dari kartaa playlists gaar ah hoos fayl, kuwaas oo, tusaale ahaan, playlist la odhan jiray '80s' fiican doonaa gudahood gal ah 'Pop Rock' iyo sida ku saabsan 'rabaab' hoos galka 'Qadiimiga ah'.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah magacyada gal in aad tagi kartaa la idinkaa iska leh ama fikrado ka qaato.
2. guraan by Artist - playlists Abuurista u Artists kala duwan waa hab kale oo xiiso leh ee abaabulka kuwan raadkaygay. Dhab ahaantii, waxaad ku dari kartaa discography artist aad jeceshahay ee dhan ka yar hal playlist, si aad mid kasta oo ka mid ah heesaha in artist gaar ah ayaa weligood ku gabyeen.
3. guraan by Event ama Waxqabadka - Ma doonaysaa heeso gaar ah loogu talagalay dadka wadada safarada dheer aad qaadato ama halka aad tagto ordaa, si fiican markaas in uu si sax ah sida ay tahay in aad sidoo kale la abuuro fayl iyo playlists aad. Waxaad magacaabi kartaa iyaga la mid xigmad leh oo ku raaxaystaan ​​heeso gaar ah in kor u niyaddaada halka ku hawlan hawlaha cayiman. Waxa kaloo aannu users qaba playlists la mid ah, laakiin, bil kasta, si ay leeyihiin mid ka mid ah January, February iyo March iyo wixii la mid ah. Qaybta ugu wanaagsan waa in aad u baahan tahay ma noqon welwelsan tahay gabagabadu la tirtiro, kuwaas oo playlists fayl ku Spotify, sida aad iyaga mar walba ku soo celin karaa iyadoo la kaashanayo qasabno yar.
> Resource > Spotify > Way fududahay in la abuuro playlist ku Spotify iyo Them Abaabulaan